Qarax ka dhacay Ceel-Waaq | KEYDMEDIA ONLINE
CEEL-WAAQ, Soomaaliya - Labo qof ayaa ku dhimatay, saddex kalena way ku dhaawacmeen qarax miino oo Maanta oo Khamiis ah ka dhacay maqaayad ku taalla gudaha degmada Ceel-Waaq, ee gobolka Gedo.
Sarkaal katirsan laamaha amniga oo la hadlay KON ayaa sheegay in qarax uu dhacay xili Maqaayadda Shaah ka cabayeen Askar katirsan militeriga dowladda Soomaaliya iyo dad kaloo shacab ah, kuwaasoo dhaawac iyo dhimasho kasoo gaartey weerarka.
Ciidamada dowladda ayaa goobta gaarey qaraxa kadib, iyagoo sameeyay howlgal aan jirin cid lagu qabtay. Kuwaa remote-ka ka hagayay miinada ayaa baxsaday markii ay qaraxday kadib.
Ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, balse Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada nooca ah ka fulisa dalka, iyadoo dagaal kula jirta mudo ka badan 10 sano DF iyo AMISOM.
0 Comments Topics: alshabaab amisom ceel waaq gedo qarax
Qarax labaad oo ka dhacay Muqdisho
Warar 28 February 2021 11:57